Ngakanani Amabhizinisi Atshala Imali Kumasu Okumaketha Okuqukethwe? | Martech Zone
Ngakanani Amabhizinisi Atshala Imali Kumasu Wokumaketha Okuqukethwe?
NgoMgqibelo, Januwari 9, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Lokhu infographic kusuka Tamba, the I-Content Marketing Revolution, inokuthile nje mayelana nokuqoqwa okuhle kakhulu kwezibalo kuwo womabili amabhizinisi e-B2B ne-B2C ukunika izizathu zokukhulisa imizamo nezindleko zawo amasu wokuthengisa okuqukethwe. Kuyathakazelisa ukuthi, cishe isigamu sayo yonke imisebenzi yokubhala neyokuklama ikhishelwa ochwepheshe bokuqukethwe.
Qiniseka ukuthi ufunda okuthunyelwe kwethu okujulile ku lokho okuqukethwe kwe-Content Marketing nokuthi ungalakha kanjani isu lokumaketha lokuqukethwe. Futhi - kunjalo xhumana nathi i-ejensi yokuthengisa okuqukethwe uma ufuna usizo. Ikakhulukazi uma usembonini yezobuchwepheshe kakhulu. Singumholi ekucwaningeni, ekubhaleni nasekuklanyweni kwama-athikili, ama-infographics, namaphepha amhlophe ezimbonini zokumaketha nezobuchwepheshe.
Kusetshenziswa Isabelomali Esingakanani Ekumaketheni Okuqukethwe?
Imali esetshenzisiwe ekumaketheni okuqukethwe yayingama- $ 1.75 wezigidi ngenhlangano eyodwa kwezingu-10 zebhizinisi echitha ngaphezulu kwe- $ 135 million minyaka yonke ngokusho kwe-Content Marketing Institute. IRed Bull iqashe abantu abayi-20 ngenxa yezindaba zayo, iNestle inabaphathi bomphakathi abacishe babe ngama-1.1 abakhiqiza okuqukethwe nsuku zonke, uCoca-Cola uchitha imali eningi enza okuqukethwe kunokukhangisa kwethelevishini kanti uKraft ulinganisela ukuthi kuveza izikhangiso eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-4 ngokukhangisa okuqukethwe - i-XNUMXx investimenti ngaphezu kokukhangisa okuhlosiwe!
Abakhangisi be-B2B basebenzisa ama-28% wesabelomali sabo kokuqukethwe, ama-55% azonyusa imali esetshenzisiwe
Abakhangisi be-B2C basebenzisa ama-25% wesabelomali sabo kokuqukethwe, ama-59% azonyusa imali esetshenzisiwe
Tags: b2bb2camasu wokuqukethwe kwebhizinisiamasu wokuqukethwe kwabathengiamasu wokuthengisa okuqukethweamasu wokuqukethwe
Ukubheka Okukhethekile Okukhethekile ku-Rundown Content Studio
Ibiza malini i-infographics? (Futhi Ungayisindisa Kanjani i- $ 1000)
Jan 12, 2016 ku-7: 54 AM
Ukumaketha kokuqukethwe kungumenzi wenkosi, ukusebenzisa imali ukumaketha okuqukethwe nokuqukethwe okuhle kwezinsiza kubhulogi lakho lamawebhusayithi kuzosiza kakhulu amawebhusayithi akho ukuthi afinyelele futhi ahlonishwe
Jan 12, 2016 ngo-10: 53 PM
Ucezu oluhle kakhulu. Ifingqa kahle isimo sokumaketha kokuqukethwe. Ngiyabonga